Aragtiwanaagsan.com – Xuskii sanad guuradii Aas aaskii ururkii SNM oo shalay hargeysa lagu qabtay!!
Apr 07, 2019 cabdicasiis mohamed Bogga Horumarka, Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka, Waxbarasho 0
waxa maalintii shalay subixii lagu qabtay hudheelka maansoor ee hargeysa…xuskii Aas aaskii iyo sanad-guuradii 38 aad ee ka soo wareegtay xiligii la aas aasay ururkaas. waxa xaflad ballaadhan oo arrintaas iyo dhacdadaas taariikhiga ah,lagu qabtay hudheelka maansoor,waxana halkaasi ka soo qaybgalay dad badan oo ay ku jiraan raggii Aas aasay ururka SNM.waxa kaloo ka soo qaybgalay wasiirka tirsan xukuumadda Somaliland..marwo ..Hinda gaandhi oo ah,wasiirka wasaaradda shaqo galinta iyo arrimaha qoyska. ugu horeyntii waxa hadalka bilaabay furista …mujaahid..ilbir…oo ku soo dhaweeyey ..gudoomiye ku xigeenka jimciyaddii Sooyaal ee ururkii SNM, Mujaahid …Yuusuf Maydal Cumar…oo ka hadlay ujeedada loo qabanaayo xuskan iyo micnaha uu ku fadhido…halkankii dalka lagu xoreeyey ee dib loogula soo noqday xorimadu. waxa kaloo kaloo madasha ka hadlay..laba mujaahid oo ka mid ahaa..raggii ugu horeeyey ee aas aasay ururkii SNM oo kala ahaa…Mujaahid..Eng.Maxamed Xaashi cilmi iyo Mujaahid Pro. C.salaam Yaasiin….oo ka waramay sababta iyo hadafka ay u aas aaseen. waxa kaloo iyana goobtaasi ka hadlay..wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha..Mujaahidad …Yurub Abiib…iyo Wasiirka shaqo galinta marwo…Hinda Gaandhi..oo iyana hadallo qiimo badan oo dadkii iyo iyadaba ka ooyiyey ka jeedisay oo sheegtay in halgankii dad badan dadkoodii ku waayeen oo ay ku cidloobeen…oo ay garab waaween….ugu dambeyntii waxa halkaasi lagu guuddoonsiiyey shahaado sharafyo dadkii uu ururku u gartay in ay yihiin shaqsiyaadkii aad ka ugu dhago nuglaa hawalaha ururka ee samofalka ah..ee garab galay haddii ay noqoto dhaqaale iyo mid taageero ah ba. hadaba,haddii aanu nahay maamulka websiteka caalamiga ah,,waxanu halkan idiin ku haynaa alban ballaadhan oo sawiro ah,oo aanu shalay xafladda ka qaadnay bilow ilaa dhammaad. nala daawada…daawasho wacan.
Sawirqaadistii iyo diyaarintii: C.casiis Maxamed Yoonis(ansaari).
Maamulaha websiteka aragtiwanaagsan.com.
kala soco soco websiteka aragtiwanaagsan.com dhacdooyin iyo barnaamijyo xiiso iyo xog iyo taariikh wata. kuna xayeysii ganacsigaaga ……
Ururka Aqoonyahanka iyo Cilmi baadhista ee Somaliland oo Xalay casho-sharaf u sameeyey laba xubnood oo ka tirsanaa oo xilal dawladda Somaliland u magacawday!! Wax ka baro Dhakhtarka dadka faqiirka ah ee dalka Masar!!
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka...